DF oo cambaareysay qoraal meel ka dhaca oo hayadaha ICRC iyo SRCS kasoo saareen qaraxii Ex-Control | Xaysimo
Home War DF oo cambaareysay qoraal meel ka dhaca oo hayadaha ICRC iyo SRCS...
DF oo cambaareysay qoraal meel ka dhaca oo hayadaha ICRC iyo SRCS kasoo saareen qaraxii Ex-Control
Qoraal kasoo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ka xun tahay in in Bisha Cas iyo laan-qeyrta Cas ay weerarkaas “ku qeexeen iska hor imaad u dhexeeyay laba Dhinac.”
Qoraalka ay ka hor-timid dowladda ee kasoo baxay labadan hay’ad ayaa u dhignaa sidan: “Dhab ahaantii aad ayaan uga naxnay weerarkan [Ex-Control]. Mar labaad, shacabka ayaa ah kuwa ku dhacaya cawaaqibka iska-horimaadka mana ahan wax la aqbali karo. Waxaan jecel nahay inaan xusuusino dhammaan dhinacyada ku lugta leh iska-horimaadka inay ka digtoonaadaan dadka rayidka ah. Waa in la dhowraa. Waa in la badbaadiyo.” ayuu yiri Maxamed Ibraahim oo ah kormeera hawlgallada ICRC ee caasimadda Soomaaliya.
“Warka ka soo baxay ICRC iyo SRCS wuxuu meel ka dhac iyo xadgudub ku yahay guud ahaan Dawladda iyo Shacabka Soomaaliyeed ee Argagixisadu soo weerartay gaar ahaana dadkii ku Waxyeeloobay oo u badnaa Arday, caruur iyo hooyooyin iyagoo aan waxba galabsan Argagixisadu Xasuuq u geysatay.”
“Qoraalka ayaan intaas ku daray “Labada Hay’adood aan kor ku soo sheegnay iyo kuwa la midka ah ee ka hawlgala Soomaaliya Waxaan la socodsiinaynaa in Dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan Argagixiso duullaan ku ah Dadkooda, Dalkooda iyo Diintooda.”